Spotify लाई इजाजतपत्र बिना संगीत प्रयोग गर्न ११२ मिलियन तिर्नु पर्छ ग्याजेट समाचार
दुई वर्ष अघि स्पोटिफको बिरूद्ध एक क्लास एक्शन मुद्दा दायर गरिएको थियो। यसमा, लोकप्रिय स्ट्रिमिंग सेवालाई केही संगीत टुक्राहरू प्रसारण गर्न सक्षम हुन आवश्यक इजाजतपत्रहरूको लागि उचित रूपमा भुक्तान नगरेको आरोप लगाइएको थियो। त्यसोभए कम्पनीले लाइसेन्स विना संगीत प्रयोग गरेको हुन्छ। उनीहरूले आरोप लगाए कि उनले कलाकारहरूलाई घोटाला गरे। यस्तो देखिन्छ कि केसको अन्त्य हुँदैछ, यद्यपि कम्पनीले धेरै पैसा तिर्नु पर्नेछ।
किनभने केहि मिडिया जस्तो कि टीआरआर पहिले नै प्रकट भइसकेको छ, स्पोटिफाइ न्यायाधीशसँग एक सम्झौतामा पुगेको छ। यो सम्झौताको माध्यमबाट, कम्पनीले आफ्नो सेयरका लागि ११२..112,5 मिलियन डलर भुक्तान गर्नुपर्नेछ। कम्पनी को लागी एक महत्वपूर्ण झटका।
दुई कलाकारहरू यस मांग सुरु गर्नका लागि पहिलो थिए, जुन संगीत लेबलका साथै चाँडै नै थपियो। कम्पनीले तिर्नु पर्ने ११२ मिलियन मध्ये, केहि .43,5 XNUMX. million मिलियन डलर यी कार्यहरूबाट प्रभावित लेबल र कलाकारहरूलाई विनियोजन गरिनेछ.
स्पोटिफाइले निरन्तर तिनीहरूको निर्दोषताको रक्षा गरेको छ र भनिएको छ कि तिनीहरू लाइसेन्स बिना संगीत प्ले गर्न चाहँदैनन् वा कलाकारहरूलाई भुक्तान नगर्न प्रयास गरिरहेका छन्। उनीहरूले टिप्पणी गर्दछ कि केही केसहरूमा लाइसेन्सदातालाई सम्पर्क गर्ने तरिका फेला पार्न गाह्रो भयो त्यो संगीत खेल्न सक्षम हुन।
भुक्तानी गर्नुपर्ने पैसाको त्यो रकमको अन्य भागलाई सम्बन्धित अधिकारहरू प्रयोग गर्न प्रयोग गरिनेछ। यस तरिकाले, स्पोटिफाइले कुनै कुराको डर बिना संगीत प्ले गर्न सक्छ।। यद्यपि यी कलाकारहरू मध्ये धेरै पूर्ण रूपमा खुशी छैनन्, किनभने उनीहरू विश्वास गर्छन् कि कम्पनीले करोडौं अतिरिक्त डलर बचत गर्न सम्झौता गरेको छ।
अहिलेसम्म Spotify बाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि यो सम्भव छ कि चाँडै नै त्यहाँ हुनेछ र अधिक स्ट्रिमिंग सेवा को लागी यो महत्वपूर्ण कानुनी झटका बारे जानिन्छ। जे होस् कम्पनीले पहिले टिप्पणी गरेको थियो कि उनीहरूले कलाकारहरूलाई भुक्तान गर्नका लागि यी प्रजननहरूबाट प्राप्त कोष भण्डार गरिरहेका थिए।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » हाम्रो बारेमा » स्पोटिफाईले इजाजतपत्र बिना संगीत प्रयोग गर्न ११२ मिलियन डलर भुक्तान गर्नेछ
जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ? गुगल स्पेन मा आफ्नो रोजगार खोज इंजन शुरू गर्दछ